ekhaya / Bible / ezincwadini / Paul's 1st Letter to the Corinthians
1:1 Paul, ababiziweyo umpostile kaYesu Kristu ngokuthanda kukaThixo; noSostenes, umzalwana:
1:2 ukuba ibandla likaThixo eliseKorinte, kwabo abangcwaliselwe kuKristu Yesu, bebizelwe ukuba yimilowo yakwaThixo ndawonye nabo bonke abo lwayo igama leNkosi yethu uYesu Kristu ezindaweni zonke kwindawo yabo kwaye zethu.
1:3 Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu.
1:4 Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngokuqhubekayo ngenxa yobabalo lukaThixo, ukuba sele awanibabala ngalo nikuKristu Yesu.
1:5 By umusa, ezintweni zonke, kokuba ziye zaba zizinhanha kuye, kuwo onke amazwi konke, nangokwazi konke.
1:6 Kwaye, ubungqina bukaKristu iye yaqinisa kuwe.
1:7 Ngele ndlela, akukho nto-nye uyisweleyo nangayiphi ubabalo, njengoko nilindele ukutyhileka kweNkosi yethu uYesu Kristu.
1:8 kwaye yena, kakhulu, qinisa, kude kube sekupheleni, ngaphandle wecala, kwada kwayimini yokufika kweNkosi yethu uYesu Kristu.
1:9 UThixo uthembekile. NgoJesu, kokuba ziye enabizelwa nguye ebudlelaneni boNyana wakhe, UYesu Kristu iNkosi yethu.
1:10 Kwaye, Ndiyakucenga, bazalwane, ngalo igama leNkosi yethu uYesu Kristu, ke, ukuba ulowo kuni uthetha ngendlela efanayo, nokuba kungabikho yomsantsa phakathi kwenu. Ngoko ngamana ungaba nigqibelele, kwaloo ngcingane nangokwesiko efanayo.
1:11 Kuba ndazisiwe kuboniswe kum, ngawe, bazalwana bam, ngabo abakunye Chloes, ukuba kukho iimpikiswano phakathi kwenu.
1:12 Ukutsho ke ndithi ngenxa yokuba ngamnye kuni uthi: "Ngokuqinisekileyo, Mna ndingokaPawulos;"" Kodwa mna ndingoka-Apolo;"" Inene, Mna ndingokaKefas;" njengo: "Nam ndixelisa uKristu."
1:13 Ngaba uKristu bahlukahluka? Kwabethelelwa uPawulos yini na emnqamlezweni ngenxa yenu? Okanye nabhaptizelwa egameni likaPawulos na?
1:14 Ndiyabulela kuThixo, ukuba ndingabhaptizanga namnye kuni, ngaphandle kukaKrispo noGayo,
1:15 ukuze nabani na uthi kuni abaye babhaptizwa egameni lam.
1:16 Kwaye ndabhaptiza noStefano nendlu Stephanus. Okunye kunale, Andikhumbuli ukuba ndabhaptiza nabanye.
1:17 Kuba uKristu akazange mna akandithumanga kubhaptiza, kodwa ukuba ashumayele: hayi ngenxa ngabulumko bakuthetha, ukuze umnqamlezo kaKristu abe engenanto.
1:18 Kuba ilizwi lomnqamlezo ngokuqinisekileyo libubudenge okunene kwabatshabalalayo. Kodwa abo baye usindiswe, yiyo i, kuthi, zingamandla kaThixo.
1:19 Kuba kubhaliwe kwathiwa: "Ndiya kutshabalala ubulumko bezilumko, yaye ndiya kukucekisa Ingqondo yeengqondi ndiyitshitshise. "
1:20 Baphi isilumko? Baphi na ababhali? Uphi na lo bafuna inyaniso beli phakade? Ngaba UThixo akabenzanga ubulumko beli hlabathi ekubeni bubudenge?
1:21 Kuba ihlabathi wayengazi uThixo ngobulumko, kwaye, ke kuthe, ebulumkweni bukaThixo, kwakholeka kuThixo ukuba sifeze usindiso amakholwa, ngabo ubudenge ukushumayela kwethu.
1:22 Kuba amaYuda acela imiqondiso, namaGrike afuna ubulumko.
1:23 Kodwa thina sishumayela uKristu ebethelelwe emnqamlezweni. ngokuqinisekileyo, kumaJuda, lo ngehlazo, nasezintlangeni, lo bubudenge.
1:24 Ke kwabo babiziweyo ziye, AmaYuda kwakunye namaGrike, uKristu nguye ngenxa kaThixo, nobulumko bukaThixo.
1:25 Kuba oko bubudenge kuye uThixo kucingwa olumkileyo ngamadoda, kwaye oko ubuthathaka kuThixo ingqalelo ngamandla ngamadoda.
1:26 Ngoko unakekele ubizo lwakho, bazalwane. Kuba azizininzi izilumko ngokwenyama, azizininzi abanamandla, azizininzi amanene.
1:27 Kodwa uThixo unyule izinto ezibubudenge zehlabathi, ukuze ngokwenjenjalo adanise izilumko. Ke uThixo unyule izinto ezibuthathaka zehlabathi, ukuze yahlula owomeleleyo.
1:28 Ke uThixo unyule izinto ezingabekekileyo yaye ndidelekile zehlabathi, labo lutho, ukuze sinciphise nto abo ziyinto.
1:29 Ngoko ke, nto of mandingaqhayisi inyama emehlweni akhe.
1:30 Ke nina ngaye uKristu Yesu, owathi nguThixo ukuba abe ubulumko lwethu kunye nobulungisa kwanobungcwalisa nentlawulelo.
1:31 Kwaye, ngendlela enye, yabhalwa: "Nabani na zona, ukuba aqhayise ngeNkosi. "
2:1 Kwaye, bazalwane, ndakuba ndizile kuni, nivakalisa ubungqina bukaKristu, Andizange amazwi yaziphakamisa okanye ubulumko ephakamileyo.
2:2 Kuba nam lo andizamkelanga ndigwebe mna kwelokuba ndingazi nto phakathi kwenu, ingenguYesu Kristu, naye ke ebethelelwe emnqamlezweni.
2:3 Mna kuni ndafika, ndinoloyiko, kwaye engcangcazela kakhulu.
2:4 Yaye amazwi am nokushumayela abazange ngamazwi oyisa ngabulumko babantu, kodwa ibe ukubonakalalisa uMoya kunye isidima,
2:5 ukuze ukholo lwenu lungabi kusekelwa phezu ubulumko babantu, kodwa ngenxa kaThixo.
2:6 ngoku, sihlala sithetha ubulumko phakathi kwabagqibeleleyo, kodwa ngokwenene, oku na ubulumko beli phakade, kananjalo ukuba iinkokheli eli, leyo iya kuncitshiswa ukuba akukho.
2:7 kunokuba, Sithetha ubulumko bukaThixo obusemfihlekweni ethe ifihliwe, awathi uThixo ngenxa engaphambili phambi kwale ubudala wabumisela uzuko lwethu,
2:8 into namnye iinkokheli eli hlabathi nimazile. Kuba, ukuba babebazi, abasoze emnqamlezweni iNkosi yozuko.
2:9 Kodwa kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: "Iliso akambonanga, kwaye indlebe akeva, yaye iye yangena qatha entliziyweni yomntu, izinto uThixo awazilungisela abo bamthandayo. "
2:10 Kodwa uThixo uye wazityhila ezi zinto kuthi ngoMoya wakhe. Kuba uMoya uphengulula zonke izinto, neenzulu zikaThixo.
2:11 Yaye ngubani na onokuyazi izinto zomntu, ngaphandle kumoya phakathi ndoda? Lunjalo, akukho bani owaziyo izinto ke ziphuma kuThixo, ingenguye uMoya kaThixo.
2:12 Kodwa anamkelanga moya weli hlabathi, kodwa uMoya kaThixo, ukuze siqonde izinto esamnikwayo nguThixo.
2:13 Kwaye kwakhona bayazithetha ezo zinto, kungengamazwi bafunda enobulumko babantu, kodwa imfundiso kaMoya, ukuzisa izinto zokomoya izinto zokomoya.
2:14 Kodwa uhlobo zezilwanyana akukhathalwa ezi izinto zoMoya kaThixo. Kuba zibubudenge kuye, yaye akanako ukuyiqonda, kuba kufuneka ukuba aqwalaselwe ngokomoya.
2:15 Kodwa uhlobo yokomoya yomntu ogweba zonke izinto, yena ngokwakhe ukuze bagwetywe yi akukho mntu.
2:16 Kuba ngubani na oyaziyo ingqiqo yeNkosi, ukuze ayifundise? Kaloku thina sicinga nto-nye noKrestu.
3:1 Kwaye, bazalwane, Andikwazanga ukuthetha kuni ngathi abo ngokomoya, kodwa kunokuba ngokungathi ngabo aningabenyama. Kuba ngathi iintsana kuKristu.
3:2 Ndaniseza amasi, ukudla okuqinileyo. Kuba nibe ningekabi nakomelela. yaye eneneni, nangoku, wena awukwazi; kuba kusekhona.
3:3 Yaye ekubeni kusekho ngomona neenkani phakathi kwenu, aningabenyama, yaye wena uhamba ngokwabantu?
3:4 Kuba xa uthile athi, "Ngokuqinisekileyo, Mna ndingokaPawulos,"Kanti elinye uthi, "Mna ndingoka-Apolo,"Ninoyolo nina na amadoda? Kodwa yintoni Apollo, kwaye uyintoni na uPawulos?
3:5 Thina kuphela abalungiseleli walowo sikhoyo kuye ukholiwe, kanye njengoko uYehova inike ngamnye kuni.
3:6 mna ndatyala, Apollo wankcenkcesha, UThixo ngaphandle kokuba ukukhula.
3:7 Kwaye, ke lowo utyalayo, nalowo unkcenkceshayo akalutho, yini, kodwa uThixo kuphela, ngubani inikeza ukukhula.
3:8 Ke kaloku lowo utyalayo, kwaye nalowo unkcenkceshayo akalutho, simunye. Kodwa elowo uya kwamkela umvuzo yayo, ngokuvumelana kukubulaleka kwakhe.
3:9 Kuba thina Abancedisi bakaThixo. Nina kulinywe kaThixo; wena nokwakhiwa kaThixo.
3:10 Ngokobabalo lukaThixo, nezo nazamkelayo kum, Ndibeke ilitye lesiseko ngathi ngokomakhi osisilumko. Athi ke omnye akhe phezu kwalo. Ngoko ke, Elowo nalowo makakhangele ukuba uthini na ukwakha kwakhe phezu kwalo.
3:11 Kuba akukho namnye unako ukubeka litye limbi lesiseko,, indawo nelo libekwe kade, olukuye uKristu Yesu.
3:12 Ukuba ke umntu ukhe wakha phezu kweli litye lesiseko, zegolide, isiliva, amatye anqabileyo, iinkuni, khona, iindiza,
3:13 Umsebenzi womntu ngamnye uya kubonakala. Ngokuba isondele imini kaYehova iya kuwazisa, ngokuba iya kuvela inomlilo. Kwaye lo umlilo uya kuwucikida umsebenzi ngamnye, ukuba luhlobo luni na.
3:14 Ukuba umsebenzi womntu, awawakhayo umntu phezu kwalo, iintsalela, baya kwandula ke wowamkela umvuzo.
3:15 Ukuba umsebenzi wakhe nabani na utshiswa kuthi tu, uya kulahlekelwa yayo, kodwa yena ngokwakhe uya kusindiswa, kodwa kuphela nje ngenxa emlilweni.
3:16 Anazi na ukuba indlu kaThixo, Anazi na ukuba uMoya kaThixo uhlala ngaphakathi kwenu?
3:17 Kodwa ukuba nabani na iphula indlu kaThixo, UThixo uya kumtshabalalisa. Kuba itempile kaThixo ingcwele, nina ke niyiloo ndlu.
3:18 Makungabikho namnye uzikhohlisayo. Ukuba ubani kuni uba usisilumko kweli phakade, makabe sisidenge, ukuze abe sisilumko ngenene.
3:19 Kuba ubulumko beli hlabathi bubudenge kuye uThixo. Kwaye ke kubhaliwe kwathiwa: "Ndiza kukhwela izilumko astuteness zabo."
3:20 kwaye kwakhona: "INkosi iyazazi izicamango zezilumko, ukuba azinto. "
3:21 Kwaye, makungabikho namnye uqhayisa ngabantu:.
3:22 Ngokuba konke okwakho: nokuba nguPawulos, nokuba nguApolo, nokuba nguKefas, okanye umhlaba, okanye ubomi, okanye ukufa, okanye langoku, okanye elizayo. Ewe, konke okwakho.
3:23 Kodwa ke nina ningabakaKrestu, kwaye uKristu kaThixo.
4:1 Ngakho, makungahlulwa mntu cinga ukuba ngabalungiseleli bakaKristu nabalindi eemfihlelo zikaThixo.
4:2 Apha ke, kufuneka kubalindi ukuba ngamnye kufunyanwa ukuba athembeke.
4:3 Kodwa mna, kuyinto encinane enjalo ukuba ndincinwe nini, okanye ubudala uluntu. Kwanawo ndithi ndigwebe mna ngokwam.
4:4 Kuba mna andinanto kwi nesazela sam. Kodwa mna andigwetyelwe. Ngokuba uYehova nguye Lowo ondincinayo.
4:5 Kwaye, musani ukukhetha ityala phambi kwexesha, de kube kweNkosi. Uya yokukhanyisa izinto ezifihlakeleyo zobumnyama, yaye uya iwabonakalalise izigqibo zeentliziyo. Kwaye ke elowo nalowo abe nodumo oluvela kuThixo.
4:6 Kwaye, bazalwane, Ndiya thaca ezi zinto mna kunye Apollo, ngenxa yenu, ukuze ufunde, ngathi, ukuba kungabikho mntu kufuneka olunyuswe nxamnye umntu omnye kunye nomnye, aziphesheya oko akubhalileyo.
4:7 Kuba yintoni umahluko ukusuka kwenye? Yaye yintoni na onayo ukuba ngaba awusifumananga? Kodwa ukuba usifumene, kungani na uzuko, ngathi akwamkeliswanga?
4:8 ke, ngoku uye wagcwala, yaye ngoku sele betyetyiswa, ngokungathi ukuba ngukumkani ngaphandle kwethu? Kodwa ndinqwenela ukuba uya kuba ngukumkani, ukuze sikwazi, kakhulu, silawule kunye nani!
4:9 Kuba ngathi mna, uThixo thaca thina bapostile usivelise mva, njengoko umiselwe ukufa. Kuba siye kwi umboniso oyintlekisa ehlabathini, kunye Angels, kunye namadoda.
4:10 Ngoko ke thina siziziyatha ngenxa kaKristu, kodwa anokuqonda kuKristu? Ndibuthathaka, kodwa nina ninamandla? Wena nengqondo, kodwa ezingabekekileyo kakhulu?
4:11 Nokuba kuse kanye kweli lixa, silamba leswo, yaye ze kokubethwa aphinda are, kwaye thina isiyezi ke.
4:12 Kwaye umsebenzi we, ukusebenza ngezandla zethu. Thina wabagculela, ngoko thina. Sihlupheka ukunyamezela intshutshiso.
4:13 Thina uqalekisiwe, kwaye ke sithandazela. Siye saba njengenkunkuma eli hlabathi, efana Hlala yonke into, kude kube ngoku.
4:14 Andiyi ndinibhalela ezi zinto ukuze yahlula kuwe, kodwa ukuze ndiyaniluleka, njengokuba unina oonyana bam.
4:15 Kuba kungenzeka ninabakhaphi bemawaka alishumi kuKristu, kodwa ababaninzi kangako ooyihlo. Kuba kwabakuKristu Yesu, ngenxa yeVangeli, Mna ndikuzele.
4:16 ngoko ke, Ndiyakucenga, yibani ngabaxelisa mna, kanye njengokuba nam ndixelisa uKristu.
4:17 Ngesi sizathu, Ndinithumele uTimoti, ongumntwana wam osenyongweni, kwaye ngubani na othembekileyo ngokwaseNkosini. Yena uya kunikhumbuza iindlela zam, olukuKristu Yesu, kanye njengoko ndifundisayo ezindaweni zonke, kuwo onke amabandla.
4:18 abantu abathile baye zokuzicingela xa ecinga ukuba bendingayi kubuyela kuwe.
4:19 Ke mna ndiya kubuyela kuwe kungekudala, ukuba iNkosi ithandile. Kwaye ndiya kuqwalasela, na amazwi abo olunyuswe, kodwa ngenxa.
4:20 Kuba ubukumkani bukaThixo ngamazwi, kodwa ngenxa.
4:21 Ubuya kukhetha? Ngaba ndiya kubuyela kuni ndinoswazi, okanye uthando kunye nomoya wobulali?
5:1 Ngaphezu kwayo yonke enye into, Kuthiwa ukuba kukho umbulo phakathi kwenu, nokuba umbulo ngohlobo enjalo phakathi kweentlanga, ukuze umntu abe nomfazi kayise.
5:2 Kanti ke olunyuswe, ke wena akundazisanga kunokuba Ebindekile, ukuze yenziwe ngubani na le nto yayiza asuswe phakathi kwenu.
5:3 ngokuqinisekileyo, nangona ndingekhoyo ngenyama, Ndikho ngomoya. Ngaloo ndlela, I sele egwetyiwe, njengoko ndandikho, kulowo owenze le.
5:4 Ndathi, egameni leNkosi yethu uYesu Kristu, ukuba zibuthelwe ndawonye nomoya wam, kwi nawo amandla eNkosi yethu uYesu,
5:5 ukuba ahambise lowo elinje kuSathana, ukuba inyama itshatyalaliswe, ukuze wona umoya usindiswe ngomhla weNkosi yethu uYesu Kristu.
5:6 Akulungile ukuba uzuko. Anazi na ukuba igwele elincinane owonakaliswayo yonke intlama?
5:7 Likhupheni ngoko kuthi tu igwele elidala, ukuze nibe isonka entsha, ngokuba ningabangenagwele. Kuba uKristu, yethu iPasika, ngoku immolated.
5:8 Kwaye, ake anelise, kungekhona igwele elidala, kungekhona igwele lobubi kunye nobubi, kodwa kunye nezonka ezingenagwele sobunyulu nenyaniso.
5:9 Njengoko ndicinga ngako, ndibhale kuni incwadi: "Musani ukunxulumana nezifebe,"
5:10 ngokuqinisekileyo kungekhona izifebe eli hlabathi, ukuba angazingcolisi ngokudla kokumkani abanyolukileyo, nomzukulwana abaphangi, okanye ndawonye nabakhonzi zithixo. kungenjalo, nimelwe lokuba anduluke kweli hlabathi.
5:11 Kungoku ke ndibhalile kuni: musa maningazidibanisi nosukuba enegama lokuba ngumzalwana, ukanti ongumhenyuzi, okanye bukhali, okanye umkhonzi zithixo, nokuba ungumtshabhisi, okanye benxilile, okanye umphangi. Ekubeni umntu efana nale, musa nokuba athathe nokutya.
5:12 Ndinamsebenzi mni na ukuba ndigwebe nabangaphandle? Kodwa musa wena nina ngokwenu ningakwahluli abo ngaphakathi?
5:13 Kuba abo bangaphandle, UThixo uya kubagweba. Kodwa thumela lo mntu ububi kude ngokwenu.
6:1 Njani na ukuba nabani na kuni, ukuba impikiswano elinye, nobuganga bokummangalela phambi zobutshinga, angammangaleli phambi kwabangcwele?
6:2 Anazi na, ukuba abangcwele aba ezisuka kweli phakade, bagwebe? Ukuba ke ihlabathi ligwetywa phambi kwenu, anikufanele na ukuwathetha awona, ke, kugweba nkqu mancinanana amatyala?
6:3 Anazi na, ukuba siya kugweba izithunywa zezulu? Kobeka phi na ke kwizinto zobu ubudala?
6:4 ngoko ke, ukuba kufuneka izinto nokugweba ngani le yobudala, kutheni liqeshe abo kakhulu nideleke eCaweni, ukuba kugwebe bona ezi zinto!
6:5 Ke mna ndithetha ukuze nidane. Ingaba akukho namnye phakathi kwenu ohlakaniphileyo, ukuze kukwazi ukugweba phakathi kwabazalwana bakhe,?
6:6 kunokuba, umzalwana ongenela nxamnye umzalwana enkundleni, kwaye oku phambi ongathembekanga!
6:7 Ngoku kukho ngokuqinisekileyo mthetho phakathi kwenu, ngaphaya yonke enye into, xa une amatyala omnye komnye. Ukuba ukwamukela ukwenzakala kunokuba? Ukuba angemi ndenziwa umntu endaweni?
6:8 Ke nina nenza ukuzenzakalisa kunye ukukopela, yaye oku kubo abazalwana!
6:9 Anazi na, ukuba zobutshinga abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musa ukukhetha ukuzula baphambuka. Ngokuba izifebe, nabakhonzi-zithixo, nabakrexezi,
6:10 okanye njengempahla, okanye namadoda alale amadoda, amasela, nor yokubawa, nor benxilile, nor nabahlebi, okanye ezinokunyoluka baya kulidla ilifa ubukumkani bukaThixo.
6:11 Kwaye abanye nawe lo. Kodwa niye kwaphulelwa, kodwa niye nangcwaliswa, kodwa nina sigwetyelwe: zonke egameni leNkosi yethu uYesu Kristu, nangoMoya kaThixo wethu.
6:12 Konke na ukuba ndenze, kodwa hayi bonke kunilungele. Konke na ukuba ndenze, kodwa andiyi kuqhutywa umva ngegunya nabani.
6:13 Ukutya kokwesisu, nesisu sesokutya. Kodwa uThixo uya kubhangisa kokubini, nesisu kunye nokutya. Kwaye ke umzimba awungowohenyuzo, kodwa iNkosi; kwaye iNkosi ukuba umzimba.
6:14 Ngempela, UThixo ke wayivusa iNkosi leyo, yaye uya kusivusa nathi ngamandla akhe.
6:15 Anazi na ukuba imizimba yenu ibe yinxalenye kaKristu? Ngoko ke, I kufuneka uthabathe nesinye isahlulo kaKristu lowo, ndiwenze ube yinxalenye yehenyukazi? Mawungabi njalo!
6:16 Kwaye anazi na ukuba nabani na, ukuba onamathele kulo ihenyukazi, umzimba mnye? "Ngokuba ezimbini," uthe, "Uya kuba nyama-nye."
6:17 nabani na onamathele eNkosini, kodwa umoya mnye.
6:18 Ubalekele ubufebe. Zonke izono into yokuba umntu zingaphandle komzimba, kodwa nabani na fornicates, wona umzimba wakhe.
6:19 Anazi na ukuba imizimba yenu yindlu kaMoya oyiNgcwele,, ngubani na wena, eninaye evela kuThixo, nokuba wena olwakho?
6:20 Kuba niye nathengwa ngexabiso elikhulu. Zukisani yikhuphe uThixo ngomzimba wenu.
7:1 Ke kaloku, ngokubhekisele kwiindawo enandibhalela ngazo, ndithi,: Ndithi, Kumlungele umntu ukuba angamchukumisi umntu oyinkazana.
7:2 kodwa, ngenxa ubufebe, ndoda nganye mayibe nowayo umfazi wakhe, yaye umfazi ngamnye abe neyakhe indoda.
7:3 Indoda kufuneka azalisekise uxanduva lwakhe umfazi wakhe, kunye nomfazi kufuneka kwakhona yenzani kwaezo kumyeni wayo.
7:4 Asinto umfazi, kodwa umyeni, lowo ayinagunya kowayo umzimba wayo. kodwa, ngokufanayo nabo, ke indoda, kodwa ngumfazi, lowo ayinagunya kowayo umzimba.
7:5 ke, musa obungapheliyo izibophelelo zenu omnye komnye, ngaphandle mhlawumbe imvume, ixesha elithile, ukuze nibe bayikhuphe ngokwenu ukuba umthandazo. Ke ngoku, zibuyela eluthulini kwakhona, hleze uSathana anihende ngokusebenzisa zokuzila yakho.
7:6 Kodwa ke ndikuthetha, akathi ube, okanye njengendlela umyalelo.
7:7 Kuba bendiya kukhetha ukuba bonke ungathanda ngokwam. Kodwa umntu ngamnye unesiphiwo sakhe efanelekileyo esivela kuThixo: omnye ngale ndlela, kodwa omnye ngalaa ndlela.
7:8 Kodwa ke mna ndithi ke kwabangazekanga nabangendanga, nakubahlolokazi: Kuhle kubo, ukuba ahlale njengoko, kanye njengokuba nam.
7:9 Kodwa ke, ukuba akakwazi ukuzibamba ngokwabo, mabatshate. Kuba kulunge ngakumbi ukutshata, kunokuba kutshiswa.
7:10 Kodwa abo baye bathelela batshatile, Asindim na imiyalelo, kodwa iNkosi: umfazi ke ukuba makangahlukani nendoda yakhe.
7:11 Kodwa ukuba uye ngokwahlukana kwabo, makahlale angendi,, okanye makaxolelaniswe nendoda yakhe. Yaye Indoda ke yona mayingamali umkayo.
7:12 Nangawo amasalela, Mna ndithetha, iNkosi. Ukuba nawuphi na umzalwana unomfazi ongakholwayo, aze umfazi lowo athande ukuhlala naye, malingahlukani naye.
7:13 Kwaye nawuphi na umfazi, ukuba uthi abe indoda engakholwayo, yena lowo athande ukuhlala naye, kufuneka makangamali umyeni wakhe.
7:14 Kuba indoda leyo ingakholiweyo ingcwalisiwe nguye umfazi okholwayo, nomfazi lowo ungakholiweyo ungcwalisiwe yiyo indoda okholwayo. kungenjalo, abantwana benu ngebeba baziinqambi, kanti kunokuba ingcwele.
7:15 Kodwa ke ukuba lowo ungakholiweyo uyahluka, akenze. Kuba umzalwana okanye udade ayikwazi ukuba zenziwe phantsi kwegunya ngale ndlela. Kuba uThixo unibizele eluxolweni.
7:16 Kwaye wazi njani, umfazi, ukuba woyisindisa indoda yakho? Okanye, wazi njani, umyeni, ukuba womsindisa umfazi wakho?
7:17 kunjalo, elowo ehamba kanye njengoko uThixo wamabelayo kuye, ngamnye kanye njengoko uThixo embizile. Baqokele ukwenjenje ndizifundisayo ezindaweni zonke kuwo onke amabandla.
7:18 Kukho nawuphi na umntu asokwe wabizwa? Makabe asibandakanyi nolwaluko lwakhe. Ingaba nayiphi na indoda engalukanga wabizwa? Makabe anithanga naluswe.
7:19 Ukwaluka oku akunto, nokungaluki oku akunto; kukho kuphela ngokugcinwa imiyalelo kaThixo.
7:20 Ngamnye ngamnye ahlale yendlu efanayo apho wabizwa ngokuba.
7:21 Ngaba isicaka oye wabizwa? Musa ukuba nexhala ngayo. Kodwa ukuba ukhe abe nesakhono bakhululeke, balisebenzisa.
7:22 Kuba naluphi na umkhonzi oye wabizwa eNkosini ikhululekile eNkosini. Ngokufanayo, nawuphi na umntu free oye wabizwa ngumkhonzi kuKristu.
7:23 Wena nathengwa ngexabiso. Musa ukuba bakulungele ukuba ngamakhoboka abantu.
7:24 Brothers, Elowo nalowo, entlalweni endikuyo wabizwa ngokuba, ahlale kuloo meko noThixo.
7:25 ngoku, ngazo iintombi, Andinammiselo weNkosi. Kodwa ukunika icebo, njengoko njengowenzelwe inceba yiNkosi, ukwenzela ukuba athembeke.
7:26 ngoko ke, I ingqalelo oku ukuba kuhle, ngenxa yentswelo langoku: ukuba kulungile emntwini ukuthi aselehlala njengoko mna.
7:27 Ubotshelelwe emfazini? Musa ukufuna ukukhululwa kuye. Ingaba simahla umfazi? Musa ukufuna umfazi.
7:28 Kodwa ke ukuba uthe wazeka umfazi, akonanga. Nokuba intombi ithe batshata, ayonanga. Nangona kunjalo, ezifana nezi kuya kuba nembandezelo enyameni. Kodwa bendiya angakucongi nawe kule.
7:29 Kwaye, le nto ndithi, bazalwane: Ixesha lifinyele. Okuseleyo kuwo enjalo: bathi nabo banabafazi, babe ngathi njengabangenabo;
7:30 nabo abakhalayo, ngokungathi Musa ukulila; kunye nabo banemihlali, ngokungathi abazange bevuya; nabo bathengayo, njengokungathi balihlutha nto;
7:31 kwaye abo basebenzisa izinto zeli hlabathi, ngokungathi awusebenzisi kubo. Kuba nani kweli hlabathi kuyadlula.
7:32 Kodwa bendiya kukhetha ukuba ube ngaphandle kwexhala. Nabani na ngaphandle umfazi ukhathazekile izinto zeNkosi, ukuba angathini na ukumkholisa uThixo.
7:33 nabani na umfazi Kodwa ukhathazekile izinto zehlabathi, ukuba angathini na ukumkholisa umkakhe. Kwaye, yahlulelene.
7:34 Kwaye umfazi kwabangazekanga nabangendanga, intombi ucinga malunga izinto zeNkosi, ukuze abe ngcwele ngomzimba nangomoya. Ke yena otshate ecinga izinto zehlabathi, ukuba angathini na ukuyikholisa indoda yakhe.
7:35 Ngaphezu, Ndikutsho oku ukuze inzuzo yakho, kungekhona ukuze ukuphosa isikhubekiso phezu kwenu, kodwa ngayo nantoni unyanisekile yaye nantoni zingakunikeza ukwazi ukuba ngaphandle kokuphazanyiswa, ukuze banqule uYehova.
7:36 Kodwa ke ukuba ubani iqwalasela ukuba kubonakale ongabekekanga, ngokuphathelele intombi ngubani na ubudala abadala, yaye ngoko ke sifanele ukuba, enze naluphi ayifunayo. Ukuba ithe, ayifuni one.
7:37 Kodwa ukuba uye wagqiba ngokuqinileyo entliziyweni yakhe, yaye akukho nto unayo nayiphi na imbopheleleko, kodwa kuphela amandla intando yakhe yokuzikhethela, yaye ukuba sele egwetyiwe oku entliziyweni yakhe, ukuba makahlale eyintombi, uya kuba uyatyapha.
7:38 Kwaye, lowo ophelelwa kunye intombi yakhe batshatile wenza kakuhle, ke lowo ukuba bazibandakanye wenza kangcono.
7:39 Umfazi ubotshiwe phantsi ngumthetho ngalo lonke ixesha isaphilileyo indoda yakhe. Kodwa ukuba uye wafa umyeni wakhe, ukhululekile. Yena wazeka kwayithandayo efuna, kodwa kuphela eNkosini.
7:40 Ke yena uya kuba kunoyolo, ukuba uhlala kule meko, ngokuvumelana icebo lam. Kwaye ndicinga ukuba, kakhulu, ukuba uMoya kaThixo.
8:1 Ke kaloku, ngeendawo zamadini enziwa kwizithixo: Siyazi ukuba sinokwazi sonke. Ukwazi oku kuyakhukhumalisa, kodwa uthando luyakha.
8:2 Kodwa ukuba nabani na ucinga ukuba wazi into, akakazi uyazi ngendlela lowo ebezifanele ukuba zazi.
8:3 Kuba umntu uyamthanda uThixo, yena uyaziwa nguye.
8:4 Ke ukuba ukutya ukuba immolated kwizithixo, siyazi ukuba akukho nto isisithixo ehlabathini nto, nokuze kungabikho mntu nguThixo, ngaphandle One.
8:5 Kuba nangona kukho izinto ekuthiwa bangoothixo, nokuba kusezulwini, nokuba kuphezu komhlaba, (ukuba kwelinye ingqalelo kukho oothixo abaninzi, neenkosi ezininzi)
8:6 kodwa siyazi ukuba kukho uThixo omnye kuphela, uYise, evela kuye zonke izinto, yaye esimkhonzayo, no mnye neNkosi yethu uYesu Kristu, nezingaye zonke izinto, yaye ngaye thina.
8:7 Ke ukwazi oko bonke. Kwabanye abantu, nangoku, nge imvume kwisithixo, badle izinto ezibingelelwe izithixo. Yaye isazela sabo, kokugula, uba elingcolileyo.
8:8 Kodwa ukutya akuyi kusincomela kuThixo. Kuba xa sithe sadla, ngeke sibe ngaphezulu, ukuba asityi, asiyi kuba ngaphantsi.
8:9 Kodwa lumkela ukuba inkululeko yenu ibe unobangela wesono kwabo babuthathaka.
8:10 Ukuba umntu ubona umntu ne ulwazi ehleli phantsi ukuba badle izithixo, ngeke isazela sakhe, kokugula, sibe nesibindi ukuze badle izinto ezibingelelwe kwizithixo?
8:11 Kwaye ukuba umzalwana ogulayo kutshabalala ngolwazi lwakho, nangona uKristu wafela kuye?
8:12 Ngoko xa sisona ngale ndlela ngakubo abazalwana, kwaye kakubi isazela sabo elibuthathaka, ngoko nona kuKristu.
8:13 Ngenxa yale nto, Ukuba ukudla ikhokelela umzalwana wam esonweni, Andisayi kudla nyama, Hleze mna kukhokelela umzalwana wam esonweni.
9:1 Andikhululekanga? Andinguye na andimpostile? Andimbonanga na uYesu Kristu, iNkosi yethu? Ingaba na umsebenzi wam eNkosini?
9:2 Ke ukuba mna andimpostile kwabanye, kodwa nangoku nina ndinguye. Kuba itywina lokuqinisa obam ubupostile linini aba baseNkosini.
9:3 Okwam ukuziphendulela nabo imibuzo ndim lo:
9:4 Ngaba andinalo mna igunya adle, asele?
9:5 Ngaba andinalo mna igunya ahambe nge umfazi udade, kanye njengoko enze nabanye abapostile, kunye nabazalwana beNkosi, noKefas?
9:6 Okanye ngaba kuphela mna noBharnabhas abangenayo igunya lokuba enze ngale ndlela?
9:7 Ngubani na okhe waba wayelijoni waza wahlawula stipend yakhe? Ngubani na otyala isidiliya, aze angadli ukusuka imveliso yawo? Ngubani emadlelweni umhlambi aze nakuwasela yobisi lomhlambi?
9:8 Ngaba zisithi ezi zinto ngokwabantu? Okanye ngaba umthetho na ke ezi zinto?
9:9 Kuba kubhaliwe emthethweni kaMoses: "Uze ulunxibelele umlomo inkomo, ngoxa ibhula ukutya okuziinkozo. "Ngaba uThixo unomdla apha kunye neenkabi?
9:10 Okanye esithi lo, kanjalo, ngenxa yethu? Ezi zinto zaye zabhalwa ngqo kuthi, ngokuba lowo ulimayo, ufanele alime ngethemba, lowo ubhulayo ufanele ukubhula, kakhulu, ithemba lokufumana imveliso.
9:11 Ukuba ke thina sanihlwayelela izinto ezizezoMoya kuwe, kubalulekile ukuba uvune ukususela izinto zakho zehlabathi?
9:12 Ukuba abanye nasabelo kule gunya phezu kwenu, kutheni thina angenalungelo ngaphezulu? Ukanti thina ke elo gunya. kunokuba, sisuka sithwale izinto zonke, , hleze ukunika nayiphi singazibambezeli ngani iindaba ezilungileyo zikaKristu.
9:13 Anazi na ukuba abo basebenza endaweni engcwele badle izinto ukuze indawo engcwele, nokuba abo bakhonza kwi esibingelelweni kwakhona ukwabelana nesibingelelo?
9:14 ke, kakhulu, neNkosi le yabamisela ukuba abo abazazisayo iindaba ezilungileyo, ukuba baphile iVangeli.
9:15 Kodwa mna andiphathanga nanye kwezo zinto. Yaye andikhange ezibhaliweyo ukuze ezi zinto ukuze kwenziwe kum. Kuba kube kusilungele kanye ukuba ndife, kunokuba ukuba nabani zingabinanto uzuko lwam.
9:16 Kuba xa ndithi ndizishumayele iindaba ezilungileyo, akukho luzuko kum. Ngokuba inomsebenzi sibekwe phezu kwam. Kwaye yeha kum, ukuba ndisuka ndingazishumayeli iVangeli.
9:17 Kuba xa ndikwenzayo oko ngokuzithandela, Ndoba ndinomvuzo. Kodwa xa ndikwenzayo oku kabuhlungu, ulawulo pha kum.
9:18 Ke ngoku ntoni, ke, umvuzo wam? ke, xa eshumayela iVangeli, Ndikunike iVangeli ngaphandle kokuthatha, ukuze ndingathi kakubi igunya lam ezindabeni ezilungileyo ezi.
9:19 Kuba xa umntu simahla kubo bonke, Ndizikhonzisile umkhonzi bonke, ukuze ndibazuze zonke ngakumbi.
9:20 Kwaye, kumaJuda, Ndaba ngathi umYuda, ukuze ndiwazuze amaYuda.
9:21 Kwabo baphantsi komthetho, Ndaba ngokungathi phantsi komthetho, (nangona wayengekho phantsi komthetho) ukuze ndibazuze abaphantsi komthetho. Kubo abo ngaphandle komthetho, Ndaba ngokungathi ngaphandle komthetho, (nangona wayengekho ngaphandle umthetho kaThixo, ngokuba umthetho kaKristu) ukuze ndibazuze abo ngaphandle komthetho.
9:22 Kwabo bangenamandla, Ndaba njengongenamandla, ukuze ndibazuze abangenamandla. Kubo bonke, I baba, ukuze ndize kulisindisa zonke.
9:23 Kwaye konke ngenxa yeVangeli, ukuze ndibe namahlakani alo.
9:24 Anazi na ukuba, abo babalekayo elugqatsweni, bonke, ngokuqinisekile, ukuba iimbaleki, kodwa ke mnye kuphela ikwazile umvuzo. Ngokufanayo, kufuneka abaleke, ukuze kuzuzwe.
9:25 Ke lowo esithi azame emdlalweni kukhuphiswano etyekayo kwizinto zonke. Kwaye bakwenza oku, kanjalo, ukuze bafumane isithsaba esinokonakala. Kodwa ukwenza oku, ukuze sikwazi ukufikelela izinto onakaliswe.
9:26 Kwaye ngoko ke ndabaleka, kodwa hayi nge ukungaqiniseki. Kwaye ngoko ke ukulwa, kodwa hayi flailing emoyeni.
9:27 kunokuba, Ndisuka ndiwuqobe umzimba wam, ukuze kunika ibe servitude. kungenjalo, Ukuze ashumayele kwabanye, kodwa abe ngokwam unguGxothiwe.
10:1 Kuba andithandi ukuba ningazi, bazalwane, ukuba oobawo babephantsi kwalo ilifu, bonke baya phesheya kolwandle.
10:2 NakuMoses, bonke babhaptizwa, efini elo naselwandle.
10:3 Kwaye bonke batya ukutya kokomoya okufanayo.
10:4 Kwaye bonke basela isiselo sokomoya esifanayo. Kwaye, bonke babesela le kwiliwa elilelomoya efuna ukuba zingazifumana; iliwa elo ke lalinguye uKristu.
10:5 Kodwa ke noko, UThixo akazange uyakholiswa. Kuba bathiwa waca entlango.
10:6 Ke kaloku ezi zinto umzekelo njengoko, ukuze ungayinqweneli izinto ezimbi, kanye njengoko bona bazinqwenelayo.
10:7 Kwaye, musa ukuthatha inxaxheba zithixo, njengoko bambi kubo benjenjalo, kanye njengoko kubhaliwe: "Abantu bahlala phantsi ukuba badle, basele, kwaye ngoko ke baphakama babedla ngokwabo. "
10:8 Ke ekwenzeni okulungileyo benze umbulo, njengoko abathile kubo wahenyuza, kwaye ke engamashumi amabini anesithathu amawaka bawa phezu ngosuku olunye.
10:9 Ke ekwenzeni okulungileyo ukulinga uKristu, njengokuba inxenye yabo yahendayo, ngoko ke batshabalala ziinyoka.
10:10 Yaye ukuba nimkrokrele, njengoko abathile kubo bambombozelayo, ngoko batshabalala ngumtshabalalisi.
10:11 Ke zonke ezi zinto zenzeka kubo njengomzekelo, kwaye ngoko ke ibhalelwe ukuze ilungiswe yethu, ngenxa yobudala lokugqibela sehlelwe.
10:12 Kwaye, bonke iqwalasela ngokwakhe ukuba bemi, makabe makalumke angawi.
10:13 Isilingo ukuba abambelele kuwe, ngaphandle koko abantu. Kuba uThixo uthembekile, yaye akayi kuvumela ukuba nilingwe ngaphezu kwamandla akho. kunokuba, uya umphumela Providence wakhe, nakwabathile isilingo, ukuze nibe nako ukuthwala.
10:14 Ngenxa yale nto, kakhulu Othandiweyo yeyam, babalekele ekunquleni izithixo.
10:15 Ekubeni mna ndithetha kwabo banokuqonda, kugweba endikuthethayo ngokwenu.
10:16 Indebe yintsikelelo le siyisikelelayo, ngaba asibubudlelane na ngeGazi likaKristu? Kwaye ke isonka ukuba aphule, ngaba loo nto ayithethi kuthi sinenxaxheba kumzimba iNkosi?
10:17 Esebenzisa sonka sinye, thina, nakuba abaninzi, simzimba mnye: sonke thina ningamadlelane nathi ngazo sonka sinye.
10:18 Cinga Israel, ngokwenyama. Abo badla amadini, abadlelani nesibingelelo eso,?
10:19 Yintoni elandelayo? Ngaba ndithi ukuba oko immolated siyiyo isithixo nantoni? Okanye ukuba isithixo siyinto na?
10:20 Ke ezo zinto iintlanga immolate, ke immolate ukuba iidemon, kungekhona kuThixo. Kwaye andifuni nibe nesabelo needemon.
10:21 Aninako ukusela indebe yeNkosi, kunye nendebe yeedemon. Awunakuba ngamadlelane Isithebe sikaNdikhoyo, zingamahlulelana nathi etafileni yeedemon.
10:22 Okanye sifanele Siyayikhweletisa na iNkosi ikhwele? Asisayi komelela na kunabo yena? Konke na ukuba ndenze, kodwa hayi bonke kunilungele.
10:23 Konke na ukuba ndenze, kodwa hayi bonke uyakha.
10:24 Makungabikho namnye ufuna yena, kodwa abanye.
10:25 Yonke into ethengiswa kwimarike, ukuze nidle, ngaphandle kokubuza imibuzo ngenxa yesazela.
10:26 "Umhlaba nabo bonke nokuzala kwawo kuNdikhoyo."
10:27 Ukuba bayamenywa naziphi abangakholwayo, kwaye nawe uyafuna ukuya, ukuze yonke into ebekwa phambi kwenu, ngaphandle kokubuza imibuzo ngenxa yesazela.
10:28 Kodwa ke ukuba ubani uthe, "Oku ezibingelelwe kwizithixo,"Musani ukukutya ke oko kutya, ngenxa yalowo wathi nina, nangenxa yesazela.
10:29 Kodwa ke mna izazela omnye umntu, ukuba eyakho. Kuba kutheni inkululeko yam ifanele igwetywe isazela somnye?
10:30 Ke ukuba mna ndidla ngombulelo, Yini na ukuba ukwagculele phezu ukuba sinike umbulelo ngazo?
10:31 ngoko ke, enoba niyatya, nokuba niyasela, okanye nantoni na eyenye ukuze wenze, ukwenza yonke into singenxa yozuko lukaThixo.
10:32 Yiba ngaphandle sikhubekisa nganto amaYuda, kwaye ngokusingisele kwiintlanga, yaye ibandla likaThixo,
10:33 njengokuba nam, ezintweni zonke, sicela wonke, ndingafuni okona ngokwam, kodwa okona kwabanye abaninzi, ukuze basindiswe.
11:2 Ke kaloku ndiyanidumisa,, bazalwane, kuba nindikhumbula ngeendawo zonke, ngendlela efana ukubambelela iziyalezo zam njengoko ndibanikele phantsi kuwe.
11:3 Ngoko ndifuna ukuba nazi, ukuba intloko yomntu wonke oyindoda nguKristu. Kodwa ke intloko ke yomfazi yindoda. kodwa ngokwenene, intloko ke kaKristu nguThixo.
11:4 Umntu wonke oyindoda, ethandaza, mhlawumbi eprofeta, enento entloko ihlazisa intloko yakhe.
11:5 Umntu wonke ke ongumfazi, ethandaza, mhlawumbi eprofeta, engenasigqubuthelo entloko akagqubuthele ihlazisa intloko yakhe. Kuba oko kunto-nye nokuba uchetyiwe.
11:6 Ngoko ke umfazi, ukuba akagqubuthele, makaselenquthulwa nokunquthulwa. Ngempela ke, ukuba kulihlazo ukuba umntu obhinqileyo ukuba anquthulwe, mhlawumbi achetywe, okanye ukuba uchetyiwe yakhe intloko, ngoko ke kufuneka nesigqubuthelo entloko yakhe.
11:7 ngokuqinisekileyo, indoda ayifanele ukuba nesigqubuthelo entloko, ngokuba ingumfanekiselo nozuko lukaThixo. Ke yena umfazi luzuko lwendoda.
11:8 Kuba indoda ayiphume emfazini, kodwa umfazi ephume kwindoda.
11:9 yaye eneneni, indoda ayidalwanga ngenxa yomfazi, kodwa ngumfazi owadalwa ngenxa yendoda.
11:10 ngoko ke, umfazi ufanele ukuba abe nomqondiso wegunya phezu kwentloko yakhe, ngenxa yezithunywa zezulu.
11:11 kodwa ngokwenene, indoda ayikho ngaphandle komfazi, namvula wesifazane khona kungekho ndoda, eNkosini.
11:12 Kuba kanye njengoko umfazi yabakho ukususela endodeni, ngokunjalo ntoni omntu akhona ngowesifazane. Kodwa zonke izinto zivela kuThixo.
11:13 Zigwebeleni ngokwenu. Ngaba kufanelekile ukuba umfazi ukuthandaza kuThixo, engagqubuthele?
11:14 Kananjalo imvelo ngokwayo ayinifundisi na,, kanjalo, ukuba umntu uba neenwele zakhe ezinde, ukuba kulihlazo oko kuyo??
11:15 kodwa ngokwenene, umfazi xa ikhula neenwele zakhe ezinde, kuluzuko oko kuye, ngenxa yokuba iinwele zakhe uye wazinikwa iinwele ezinde endaweni yesigqubuthelo.
11:16 Kodwa ukuba nabani na ingqondo ukuphika, akukho thina asinasiko linjalo, nokonakala Church of God.
11:17 Ngoku shelwe ukuba, ngaphandle kokudumisa, ngale: ukuba nithe nahlangana ndawonye, yaye kungabi ngcono, kodwa kubi.
11:18 Okokuqala, kanjalo, Ndiyeva ukuba xa nithe nahlangana ndawonye ibandla, kukho uqhekeko phakathi kwenu. Kwaye ndiyakholwa le, inxenye.
11:19 Kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano, ukuze abo avavanywe baye babonakale phakathi kwenu.
11:20 Kwaye, xa nithe nahlangana ndawonye, ayisendim ukuze nidle isidlo seNkosi.
11:21 Kuba ngamnye uthatha isidlo zakhe kuqala ukuba badle. Kwaye ngenxa, umntu omnye alambe, ngoxa enye benxilile.
11:22 Ngaba na izindlu, apho ukuba badle, basele? Okanye ngaba unayo ndelelo ngenxa Church of God ukuba wayeza yahlula abo abe ndelelo? Yintoni na mna ndithi kuni? Ukuba kaloku ndiyanidumisa, bazalwana? Mna na bekudumisa kule.
11:23 Kuba mna ndakwamkela kuyo iNkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni: ukuba iNkosi uYesu, kuchazo ebusuku ukuba yadluliselwa, wathatha isonka,
11:24 wabonga, wasiqhekeza, wathi: "Thabathani nidle. Lo ngumzimba wam, leyo uya kunikwa phezulu kuwe. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. "
11:25 Ngokufanayo naye, indebe, emveni kokuba bedlile isidlo, bathi: "Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. yenza le, ngamaxesha onke enisukuba niyisela, kwenzeleni ukundikhumbula. "
11:26 Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kweNkosi, aze ibuyisela.
11:27 Kwaye, osukuba esidla eso sonka, okanye osela indebe yeNkosi, ngokungafanelekileyo, uya kuba noxanduva lomzimba negazi leNkosi.
11:28 Makazicikide ke ngokwakhe umntu, yaye, ngele ndlela, adle kuyo isonka, phuza kwindebe.
11:29 Kuba othe udlayo, uselayo, ngokungafanelekileyo, uzidlela aziselele igwetywe ngokwakhe, engawucaluli nje ukuba umzimba weNkosi.
11:30 Nje ngeziphumo, baninzi phakathi kwenu abaswele amandla, nabayimilwelwe phakathi kwenu, kwaye abaninzi balele.
11:31 Kodwa ukuba thina ngokwethu besizicalula, ngoko ngokuqinisekileyo ngesiba asigwetywa.
11:32 Kodwa xa sahlulelwa, sisuke lilungiswe iNkosi, ukuze singasingelwa phantsi ndawonye eli hlabathi.
11:33 Kwaye, bazalwana bam, xa nithe nahlangana ndawonye ukuba nidle, siziqaphele omnye komnye.
11:34 Ukuba ke ubani ulambile, makadle ekhaya, ukuze ungahlanganisani ndawonye ematyaleni. Ke bona abanye, Ndiya kumisa kuyo ukuze xa zifika.
12:1 Ke ngezipho ezizezoMoya, Andifuni ukuba ningazi, bazalwane.
12:2 Niyazi ukuba xa abeentlanga, weza ezingento, ezizidenge, ukwenza oko ayeqhutywa ukuba wenze.
12:3 Ngenxa yale nto, Ke ndithanda ukuba nazi, ukuba akukho namnye, ethetha ekuMoya kaThixo, uthetha hlamba nxamnye noYesu. Kwaye akukho namnye unako ukuthi uYesu uyiNkosi, engekuye uMoya oyiNgcwele.
12:4 Ngempela, kukho lezisa ezahlukeneyo, kodwa ke ikwanguloo Moya mnye.
12:5 Kwaye kukho imisebenzi ezahlukeneyo, kodwa kusetyenzelwa iNkosi enye.
12:6 Kwaye kukho imisebenzi ezahlukeneyo, kodwa ke ikwanguloo Thixo mnye, osebenza into wonke.
12:7 kunjalo, ukubonakalalisa uMoya inikwa ngamnye lasinga izinto ezakhayo.
12:8 ngokuqinisekileyo, ukuya kwenye, ngaye uMoya, unikwa amazwi obulumko; kodwa kwenye, kwangokwaloo Moya, amazwi ulwazi;
12:9 kwenye, kwangaloo Moya, ukholo; kwenye, kwangaloo Moya, isipho sokuphilisa;
12:10 kwenye, imimangaliso; kwenye, isiprofeto; kwenye, Ingqondo imimoya; kwenye, iintlobo ezahlukeneyo iilwimi; kwenye, ukuchazwa kwamagama.
12:11 Kodwa enye zisetyenzwa kwangaloo Moya mnye zonke ezi zinto, umabela elowo ngokokuthanda kwakhe.
12:12 Kuba, njengokuba umzimba umnye, kodwa unamalungu amaninzi, ukuze onke amalungu omzimba, nangona zininzi, simzimba mnye kuphela. Ukwanjalo ke noKristu.
12:13 yaye eneneni, ngaMoya mnye, thina sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, nokuba singamaJuda okanye amaGrike, nokuba ungumkhonzi nokuba ungokhululekileyo. Kwaye sonke sasela Moya mnye.
12:14 Ngokuba umzimba, kakhulu, ayikho ingxenye, kodwa abaninzi.
12:15 Ukuba unyawo belungáthi, "Ngokuba ndingesiso isandla, Andinguye na umzimba,"Ngaba ngoko akuyi kuba umzimba?
12:16 Yaye ukuba indlebe bendinothi, "Ngenxa yokuba mna ndingelilo iliso, Andinguye na umzimba,"Ngaba ngoko akuyi kuba umzimba?
12:17 Ukuba ke wonke umzimba iliso, indlela bendinondiphulaphulayo? Ukuba ubukukuva uphela, bekuya kunuka njani?
12:18 kodwa kunokuba, UThixo uye wabeka amalungu, ngamnye kubo, emzimbeni, kanye njengoko wathandayo.
12:19 Ngoko Ukuba ke onke ebelungu linye, ngaba bekuya kuba umzimba?
12:20 kodwa kunokuba, kukho amalungu amaninzi, kanjalo, kodwa mnye wona umzimba.
12:21 Alinako ke iliso ukuthi kwisandla, "Akukho mfuneko yokuba imisebenzi yakho." Kwaye kwakhona, intloko ayinakuthi kwiinyawo, "Nina akukho ukusetyenziswa kum."
12:22 Inyaniso, kangangokuba kuyimfuneko ngakumbi ngabo amalungu omzimba abonakala ebuthathaka.
12:23 Nokuba siqwalasela iinxalenye ezithile omzimba abe ngaphantsi amanene, siwambathisa ezi ngesidima ngakumbi, kwaye, amalungu ezo ngaphantsi esinomfaneleko ekupheleni up ngembeko ngakumbi.
12:24 kunjalo, Amalungu ethu ke abekekileyo akufuneki nto kuwo, ekubeni uThixo wawumanya umzimba kunye, esasaza udumo olukhulu kakhulu oko unalo imfuneko,
12:25 ukuze kubekho ukuze kungabikho kwahlukahlukana emzimbeni, kodwa endaweni yoko iindawo ngokwabo ukuze anyamekele omnye komnye.
12:26 Kwaye, nokuba lilungu elinye eliva ubunzima nantoni, onke amalungu avelana nalo. okanye, nokuba lilungu elinye ufumana uzuko, onke amalungu avuyisane.
12:27 Ngoku ke umzimba kaKristu, kunye iindawo ezifana nayiphi na inxalenye.
12:28 yaye eneneni, UThixo uye waseka ethile eBandleni: Abapostile kuqala, Abaprofeti yesibini, Ootitshala yesithathu, elandelayo mangaliso-abasebenzi, kwaye ngoko ke ubabalo yokuphilisa, lokusiza abanye, yokubusa, iindidi ezahlukeneyo iilwimi, kunye nentsingiselo yamagama.
12:29 Ingaba zonke Abapostile? Ingaba bonke abaProfeti? Bayacelwa bonke ootitshala?
12:30 Ngaba bonke abasebenzi yamandla? Ngaba bonke ubabalo yokuphilisa? Ngaba Bathetha ngalwimi zimbi bonke? Ngaba konke ukutolika?
12:31 Kodwa asabambelele charisms ngcono. Kwaye ndazityhila na indlela kodwa incamisileyo.
13:1 Ukuba ibindim ukuthetha ngolwimi abantu, okanye of Angels, ayikabikho uthando, Bendiya kuba kufana intsimbi elikhenkcezayo okanye necangci ezikhonza.
13:2 Kwaye Ndingafanelana ndinabo nobuprofeto, uze ufunde yonke imfihlakalo, kwaye ufumane lonke ulwazi, ngowabo bonke ukholo, ukuze ndikwazi olugungqisa iintaba, ayikabikho uthando, ngoko andinto yanto.
13:3 Kwaye ukuba bahambise amahlwempu ngempahla yam yonke ukuze ondle amahlwempu, ndinikela nangomzimba wam ndawunikela ukuba utshiswe, ayikabikho uthando, inikeza lutho.
13:4 Charity unomonde, unobubele. Charity alunamona, akenzi iphutha, akukho anomoya.
13:5 Charity akalinyolukelanga, akafuni ukuba ngokwayo, akukho wamqumbisa, uyila akukho bubi.
13:6 Charity ayiyi kuvuya ubugwenxa, kodwa luvuyisana enyanisweni.
13:7 Charity kuhlupheka zonke, lukholwa zonke, luthemba zonke, umi.
13:8 Charity awupheli lathathwa, kwanokuba iziprofetho zidlula, okanye iilwimi kupheza, okanye ulwazi sonakele.
13:9 Kuba siyazi kuphela inxalenye, siprofeta kuphela inxalenye.
13:10 Kodwa xa ufika ogqibeleleyo, nokungapheleli lidlula.
13:11 Xa umntwana, Bendithetha njengomntwana, Ndaqonda njengomntwana, Mna ndicinga njengomntwana. Ndithe ke, ndakuba yindoda, Ndayibeka bucala izinto umntwana.
13:12 Ngoku sikhangela esipilini ngokwamanakanibe. Kodwa ke siya kubona ubuso ngobuso. Ngoku ndazi ngokuyinxenye, oko ke ndiya kwazi, njengokuba mna aziwa.
13:13 Kodwa ngoku, la abathathu uqhubeke: ukholo, ithemba, kunye nothando. eyona inkulu ke kuzo apho luthando.
14:1 jongani uthando. Yiba lakh izinto zokomoya, kodwa kuphela ukuba niprofete.
14:2 Kuba othe wathetha ngeelwimi, lumbi akathethi bantwini, kodwa uThixo. Kuba akukho namnye umvayo. Kodwa ngoMoya, uthetha iimfihlelo.
14:3 othe oprofetayo Kodwa uthetha ebantwini ulwakheko, noyalo kunye nentuthuzelo.
14:4 Lowo uthetha ngeelwimi uzakha yena. lowo uprofetayo Kodwa wakha Church.
14:5 Ngoku ndifuna ukuba nonke nithethe ngalwimi zimbi nonke, kodwa ke ukuba aprofete. Kuba yena oprofetayo mkhulu kunalowo uthetha ngalwimi zimbi, ngaphandle kokuba mhlawumbi intetho, ukuze ibandla libe nokwakheka.
14:6 Kodwa ngoku, bazalwane, ukuba ibindim ukuza kuni, ndithetha ngalwimi zimbi, ngaba kungenelwa njani wena, ngaphandle kokuba kunokuba ndithethe kuni ndinesityhilelo, okanye ulwazi, ndinesiprofeto, okanye imfundiso?
14:7 Kwanabo izinto ezingaphandle kwezo umphefumlo ungenza izandi, nokuba ngaba kukho umoya okanye isixhobo ezineentambo. Kodwa ngaphandle kokuba ninikela zahlule ngaphakathi izandi, kuya kwaziwa njani ukuba yiyiphi na ukusuka kumbhobho kwaye ke iqela lamagama?
14:8 Umzekelo, xa ixilongo lithe wenza lalila ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani na owoyixhobela imfazwe?
14:9 Ngoko ke nani, kuba ngaphandle kokuba khuluma ulwimi kwintetho plain, kuya kwaziwa njani na oko kuthiwa ngayo? Kuba ke noba nithethela emoyeni.
14:10 Cinga ukuba kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo iilwimi kweli hlabathi, Kanti ke akukho namnye ngaphandle izwi.
14:11 ngoko ke, ukuba andithanga ukuqonda uhlobo izwi, ke ndiya kuba ngowasemzini kulowo naye mna ndithetha; Lowo uthetha uya kuba ngowasemzini kum.
14:12 Ngoko ke nani. Yaye ekubeni kaloku nizondelela okomoya, bafune lakheke ibandla, ukuze nibe nazo ngokugqithiseleyo,.
14:13 Ngesi sizathu, kakhulu, othe wathetha ngeelwimi, makathandazele ukuba nentsingiselo.
14:14 ke, xa ndithandaza ngeelwimi, umoya wam uyathandaza okunene, kodwa ingqondo yam engenaziqhamo.
14:15 Yintoni elandelayo? Ndiya kuthandaza ngomoya, kwaye ndithandaze ingqondo. Ndifanele kumbethela uhadi ngomoya, kwaye ukucengceleza uhadi ne ingqondo.
14:16 kungenjalo, ukuba basikelelwe kuphela ngomoya, indlela kungaba othile, kwimo yokungazi, faka i "Amen" yentsikelelo yakho? Ngokuba engayazi into oyithethayo.
14:17 Kule meko, ngokuqinisekile, wena ubonga, kodwa onguwumbi akakheki.
14:18 Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam, ukuba nithethe ngalwimi zimbi nonke.
14:19 Kodwa Church, Ndikhetha ukuthetha amazwi abe mahlanu engqondweni yam, ukuze ndibafundise nabanye, amagama kunokuba alishumi lamawaka ngeelwimi.
14:20 Brothers, musa ukukhetha ukuba iingqondo zabantwana. kunokuba, ibe simahla ububi ezifana iintsana, kodwa yibani ezingqondweni zenu.
14:21 ke ngoko kubhaliweyo emyalelweni: "Ndiya kuthetha kwaba bantu ngalwimi zimbi kunye nezinye imilebe, kwaye ngokunjalo, baya awuthobele me, itsho iNkosi. "
14:22 Kwaye, iilwimi ezi zikho uphawu, kungabi ngenxa amakholwa, kodwa kwabangakholwayo; neziprofetho hayi abangakholwayo, kodwa ukuba amakholwa.
14:23 ukuba ngoko, yonke yeCawe ukuba abahlanganisele ndawonye, Ukuba ke onke ukuthetha ngeelwimi, kwaye ke ngoko abantu ningazi okanye abangakholwayo ange-, ngaba abasayi kuthi wena hlanya?
14:24 Kodwa ukuba wonke uprofetha, yaye othe ningazi okanye abangakholwayo ongena, ukuze bakholelwe zonke, kuba eqonda konke.
14:25 Zize ngokunjalo izinto ezifihlakeleyo zentliziyo yakhe ke babonakaliswa. Kwaye, esiwa ebusweni bakhe, ukuba simdumise uThixo, evakalisa ukuba uThixo uphakathi kwenu okwenyaniso.
14:26 Yintoni elandelayo, bazalwane? Xa nihlangene ndawonye ndawonye, elowo kuni abe nengoma, okanye imfundiso, okanye isityhilelo, okanye ulwimi, okanye utoliko, kodwa ke yonke into yenziwe ukuze akheke.
14:27 Ukuba nabani na ukuthetha ngeelwimi, akube ezimbini kuphela, bangadluli ezintathu, kwaye ke yena, aze ke omnye acacise intetho.
14:28 Ke, ukuba akukho ulityhilayo, ahlale cwaka ebandleni, ke ndithethe xa yena yedwa uThixo.
14:29 Kwaye Abaprofeti ke, makuthethe, ezimbini okanye ezintathu, kwaye abanye bacalule.
14:30 kodwa ke, Ukuba into watyhilelwa into omnye ohleli, owokuqala makathi cwaka.
14:31 Kuba nina nonke uyakwazi ukuprofeta ngabanye ngexesha, ukuze bonke bafunde bonke, bavuselelwe bakhuthazwe.
14:32 Kuba oomoya zabaprofeti mazilawulwe ngabaprofeti.
14:33 Kwaye uThixo ukungavisisani, ngowoxolo, kanye njengokuba nam ukufundisa onke amabandla abangcwele.
14:34 Abasetyhini kufuneka cwaka emabandleni. Kuba abavunyelwa bona ukuba bathethe; kodwa kunokuba, kufuneka ilawulwe, njengokuba usitsho nomthetho.
14:35 Kwaye ukuba ufuna ukufunda into, mabayibuze ekhaya kwawabo amadoda. Kuba kulihlazo ukuba umntu obhinqileyo ukuthetha ebandleni.
14:36 ke ngoku, njani iLizwi likaThixo kuphuma kuwe? Okanye ngaba ithunyelwe kuwe wedwa?
14:37 Ukuba umntu uba ungumprofeti, nokuba uba umntu ngokomoya, ukuba aziqonde ezo zinto ke endinibhalela zona, ukuba, ukuba ezi zinto, ukuba yimithetho yeNkosi.
14:38 Ukuba nabani na baqaphele ezi zinto, ke kufuneka ihlonitshwe.
14:39 Kwaye, bazalwane, zondelela ukuba aprofete, kwaye musa ithintele ukuthetha ngeelwimi.
14:40 Ize kungangeni yonke into yenziwe ngembeko ngokwendlela eyiyo.
15:1 Kwaye ke kaloku makwazeke kuwe, bazalwane, yeVangeli endazishumayela ngalo kuni;, ezo nani nazamkelayo, kwaye umi kuyo.
15:2 By the Gospel, kakhulu, wena abasindiswayo, ukuba bakholelwa ukuba mna ndanishumayezayo ngesisa iindaba ukuqonda, hleze kholwa ilize.
15:3 Kuba ndanikezela kuni, Okokuqala, oko ndakwamkelayo nokukwamkela: okokuba uKristu wazifela izono zethu, ngokutsho kweZibhalo;
15:4 nokokuba wangcwatywa; kwaye nokokuba uvukile ngomhla wesithathu, ngokutsho kweZibhalo;
15:5 nokokuba wabonwa nguKefas, yaye emva koko yi elinanye.
15:6 Okulandelayo wabonwa ngabazalwana abangaphezu kwamakhulu amahlanu ngexesha elinye, uninzi lwabo ahlale, kude kube ngoku, nangona abanye balele.
15:7 Okulandelayo, wabonwa nguYakobi, kamva ngabo bonke abapostile.
15:8 Ekugqibeleni ke kwabo bonke, wabonwa naye kum, ngathi umntu abazalwa ngexesha engalunganga.
15:9 Kuba mna ndingoyena mncinanana kubapostile. Kodwa mna andifanele ukuba kubizwa ngokuba ngumpostile, ngenxa enokuba ndalitshutshisa ibandla likaThixo.
15:10 kodwa, ngobabalo lukaThixo, I ndiyinto endiyiyo. Nobabalo lwakhe kum alubanga belambatha, kuba ndinenzele ndesuka ndabagqitha bonke ngokubulaleka. Kodwa ke Asindim, Ke ngobabalo lukaThixo ngaphakathi kwam.
15:11 Kuba nokuba ndim, nokuba ngabo: thina sishumayela, kwaye ke uye nakholwa.
15:12 Ke, ukuba uKristu uyashunyayelwa, nokokuba uvukile kwabafileyo, njani na ukuba abathile phakathi kwenu ukuthi, akukho luvuko lwabafileyo?
15:13 Kuba, ukuba akukho luvuko lwabafileyo, ke uKristu akavukanga.
15:14 Ukuba ke uKristu uvukile, ke ukushumayela kwethu, loba luyalambatha, ukholo lwakho nalo ngamampunge.
15:15 ke, kakhulu, aza kuyifumana thina ukuba namangqina amxokayo uThixo, ngokuba siya kube kunikwa ubungqina nxamnye noThixo, esithi ukuba wamvusa uKristu, xa abengabawiselanga nokumvusa kwakhe, ukuba, kanjalo, abafileyo abaze bavuke kwakhona.
15:16 Kuba, ukuba abafileyo abavuki kwakhona, ke uKristu akavukanga kwakhona.
15:17 Kodwa ukuba uKristu akavukanga, ke luyalambatha nokholo lwenu; ngokuba wena uya kuhlala ezonweni zenu.
15:18 ke, kakhulu, nabalele ukufa bekuKristu, Ndinge ndaphelayo.
15:19 Ukuba singabathembele kuKristu kobu bomi kuphela, ngoko ayilo ngaphezu kubantu bonke.
15:20 Kodwa ngoku uKristu avuke kwabafileyo, njengoko oyintlahlela kwabaleleyo.
15:21 ngokuba, inene,, ukufa kweza indoda. Kwaye, ukuvuka kwabafileyo kweza indoda
15:22 Kanye njengokuba kuye uAdam bafa bonke, ngokunjalo nakuye uKristu baya kubuyiselwa ebomini,
15:23 kodwa elowo nalowo kolwakhe eyiyo: Kristu, njengoko i-iziqhamo yokuqala, kolandelayo, abo ke bakaKristu, abaye babekholelwa kokufika kwakhe.
15:24 Emva koko ke ekupheleni, xa athe uya kunikelwa phezu ubukumkani kuye uThixo uYise, xa athe kwashiya bonke ubulawuli, kunye negunya, kunye namandla.
15:25 Kuba kuyimfuneko ukuba ngukumkani, ade ubeke zonke iintshaba zakhe phantsi kweenyawo zakhe.
15:26 Ekugcineni, utshaba ebizwa ukufa uya kutshatyalaliswa. Kuba wazithobela phantsi kweenyawo zakhe zonke izinto. Kwaye nakuba uthi,
15:27 "Zonke izinto ke zithe zathotyelwa phantsi kwakhe,"Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ayibandakanyi Lowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto kuye.
15:28 Xa zonke izinto zithotyelwe phantsi kwakhe, ke noNyana ngokwakhe uya phantsi kuLowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto, ukuze uThixo abe zizinto zonke kubo bonke.
15:29 kungenjalo, kuya abo babhaptizelwa abafileyo, ukuba abafileyo abaze bavuke kwakhona konke? Kutheni na ke ukuba babhaptizwe kubo?
15:30 Kutheni na ukuba sibe sinyamezela izilingo iyure yonke?
15:31 Daily I kufa, ngokusebenzisa ngokuqhankqalaza kwenu, bazalwane: wena uzaliswe endinako ndikuKristu Yesu, iNkosi yethu.
15:32 ukuba, ngokwabantu, Ndithe ngokwabantu ndalwa namarhamncwa e-Efese,, kwakuya kungenelwa njani mna, ukuba abafileyo abaze bavuke kwakhona? "Masidle size sisele, kuba ngomso siya kufa. "
15:33 Musa ukuba ningalahlekiswa. unxibelelwano Evil olonakalisayo izimilo ezilungileyo.
15:34 Yiba zivule, nina nje, kwaye musa ukuba bazimisele ukuba wone. Kuba abantu inxenye inentswela-kumazi uThixo. Ndithi ke kuni ngentlonelo.
15:35 Kodwa omnye umntu athi, "Bathini na ukuvuka abafileyo kwakhona?"okanye, "Luhlobo luni benamzimba babuyele?"
15:36 indlela yobudenge! Oko ukuhlwayelayo ayikwazi kubuyiselwa ebomini, ngaphandle kokuba kuqala kufe.
15:37 Kwaye loo nto uyihlwayelayo, akuhlwayeli sona isiqu sento esiya kubakho kwixesha elizayo, kodwa ukhozo, njengoko ingqolowa, nokuba lolwezinye iintlobo.
15:38 Kuba uThixo ke ulunika isiqu, ngokokuthanda kwakhe, kwaye emzimbeni olufanelekileyo ngamnye imbewu yakhe.
15:39 Inyama yonke inyama efanayo. Kodwa omnye okunene ngabantu, enye Ngempela yeenkomo, enye yeentaka, kwaye enye intlanzi.
15:40 kwakhona, kukho imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni. Ke xenikweni asadla ubomi lowo, ngokuqinisekile, na uzuko wezulu, omnye uzuko zehlabathi.
15:41 Omnye kokuqaqamba kwelanga, omnye kokukhanya kwenyanga, yaye omnye njengokukhazimla iinkwenkwezi. Kuba inkwenkwezi iyahluka kwenye inkwenkwezi lokukhanya.
15:42 Ngoko ke kwakhona kanye novuko lwabafileyo. Kuhlwayelwa ekonakaleni oyakuvuka bengenakonakala.
15:43 Kuhlwayelwa imbeko avuke uzuko. Yintoni sihlwayelwa ubuthathaka avuke amandla.
15:44 Yintoni na kuhlwayelwe liqumrhu isilwanyana uya kuvuka kunye nomzimba womoya. Ukuba kukho umzimba wesilwanyana, kukwakho nowomoya.
15:45 Kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa, umntu wokuqala, Adam, yenziwe ngumphefumlo ophilileyo, iya kuba njalo uAdam wokugqibela kwenziwe umoya kubuyela ebomini.
15:46 Ngoko ke yintoni, ekuqaleni, na ngokomoya, kodwa isilwanyana, uba ngokomoya.
15:47 Le ndoda wokuqala, yeyasemhlabeni, waye umhlaba; owesibini umntu, ukuba wasezulwini, ziya kuba izulu.
15:48 izinto ezifana bafana emhlabeni yasemhlabeni; kunye nezinto ezifana zifana amazulu yasezulwini.
15:49 Kwaye, kanye njengoko thina sithwala umfanekiso yintoni emhlabeni, masithi nathi ukuthwala umfanekiso woko wasezulwini.
15:50 Ukutsho ke ndithi, bazalwane, ngokuba akukutyhilelwanga oku yinyama negazi akanako ilifa ubukumkani bukaThixo; Andiyi kuba yintoni wonakele ilifa izinto incorrupt.
15:51 Khangela, Ndinixelela imfihlelo. ngokuqinisekileyo, sonke siya avuke, kodwa siya kwenziwa kumila kumbi:
15:52 ngomzuzwana, ngokuqhwanyaza kweliso, ngexilongo lokugqibela. Kuba liya kulila ixilongo, yaye abafileyo baya kuvuka, engenakonakala. Kwaye uya kuguqulwa.
15:53 Ngaloo ndlela, kubalulekile ukuba le corruptibility ukuba ukwambatha ukungonakali, yaye ngenxa yoku ukufa ukwambatha ukungafi.
15:54 Xa ke le lokufa kuthe kwambatha ukungafi, ke ilizwi elibhaliweyo kuya kwenzeka: "Ukufa kufincelwe eloyisweni."
15:55 "O ukufa, uphi na uloyiso lwakho? O kufa, uphi na ulwamvila lwakho?"
15:56 Ulwamvila lokufa sisono, amandla esono ngumthetho.
15:57 Makubulelwe ke kuThixo, ngubani usinike uloyiso olo, ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu.
15:58 Kwaye, bazalwana bam abathandekayo, kugxile nakushukuma, nihlale niphuphuma umsebenzi weNkosi, nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu ngamampunge eNkosini.
16:1 Ke kaloku, ngokubhekisele ingqokelela nangalo siyabaqalekisa abantu abenziwe ukuba abangcwele: kanye njengoko ziye zenza amalungiselelo okuba amabandla kaThixo akwelaseGalati, ngokunjalo kuya kwenziwa nawe.
16:2 Ngosuku lokuqala lweveki, iSabatha, elowo nithabatha ngokwakhe, ukubekela bucala uya kuba yintoni kakuhle kukholekile kuyo, khon 'ukuze xa kufika, iingqokelela akuyi kufuneka ukuba senziwe ke.
16:3 Ke ndakuba ndikho, lowo uya nibacikidile iileta, ezo ndiya kuthumela ukuba mabeze nezithabathaba bakho eYerusalem.
16:4 Ke ukuba kuthe kwabonakala ukuba nam ndiye kakhulu, bohamba kunye nam.
16:5 Ngoku Ndiya kuza ke kuni, xa ndithe ndacanda kwelaseMakedoni,. Kuba ndiya kwanela ukucanda nje kwelaseMakedoni.
16:6 Ke kuni mhlawumbi ndingathi ndihlale, kwaye ndidlulise nobusika, ukuze ndikhokele endleleni yam, xa kwam.
16:7 Kuba mna andiyi Ndikulungele ndinibone ngoku kuphela ndidlulayo, kuba ndithembile ukuba ukuze ahlale nani ezinye ubude bexesha, ukuba iNkosi ithe yavuma.
16:8 Kodwa ke kufuneka uhlale e-Efese, kude kubekho ipentekoste.
16:9 Kuba ndivulelwe umnyango, ezinkulu akunakuphepheka, ivulele kum, kwakunye ne bebaninzi nabachasi.
16:10 Ke kaloku, ukuba uTimoti uthe wafika, ukubona ukuba angabi nakoyika phakathi kwenu ngaphandle koloyiko. Kuba uyawusebenza umsebenzi weNkosi, kanye njengokuba nam kwenza.
16:11 ngoko ke, Ize kungabikho bani ngoko umenza into. kunokuba, kumenze endleleni yakhe yoxolo, ukuze eze kum. Kuba ndiya abalindele kunye nabazalwana.
16:12 Kodwa ngenxa yomninawa wethu, Apollo, , Ndivusa uyazi ukuba ndamangalelana naye kakhulu, ukuba eze kuni kunye nabazalwana, yaye ngokuqinisekileyo kwakungenjalo ukuthanda kwakhe ukuya ngeli xesha. Ke yena uya kufika xa kukho isithuba ixesha kwakhe.
16:13 Yiba zivule. Yima ngokholo. UMthetho ayisingathe kwaye kuqiniswe.
16:14 Zonke okwakho ukuxakeka ngothando.
16:15 Kwaye ndiyanibongoza, bazalwane: niyayazi indlu Stephanus, kunye noFortunato, kunye noAkayiko, ukuba i-oyintlahlela yelaseAkaya, nokuba baye bazinikezela ukuze ukulungiselela abangcwele.
16:16 Ngoko ke kufuneka ube zezifundo abantu ezifana nale, ngokunjalo kubo bonke abo basebenzisana kunye nokusebenza nabo.
16:17 Ngoku ndiyavuya phambi Stephanus noFortunato noAkayiko, ngokuba bakwenzelelele kuwe, bona ukungabikho kwenu.
16:18 Kuba bawuphumzile umoya wam nowenu. ngoko ke, ingqalelo abantu ezifana nale.
16:19 Iicawa of Asia Ndiyanibulisa. UAkwila noPrisila Bayanibulisa kunene eNkosini, ndawonye ibandla indlu yabo, apho nam undwendwe.
16:20 Zonke Bayanibulisa abazalwana bonke. Bulisanani ngolwango olungcwele.
16:21 Le Umbuliso esandleni sam, Paul.
16:22 Ukuba ubani akayithandi iNkosi yethu uYesu Kristu, makasingelwe phantsi! Maran Atha.
16:23 Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Kristu malube nani nonke.
16:24 sa wam nani nonke bakuKristu Yesu. Amen.